Ny famonoana indroa an'i Gina sy Marinus tao amin'ny sinema Pathé Groningen: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 Oktobra 2019	• 24 Comments
"Tena taitra be aho. Izany zavatra izany dia mitranga amin'ny sinema, toerana iray hipetrahan'ny tsirairay indraindray hijery sarimihetsika. Hafahafa izany.Izay no fihetsik'ireo mpanolotsaina ao an-tanàna Marjet Woldhuis avy amin'ny ampahany ao amin'ny filankevitra 100% Groningen. Ary io ihany koa ny fiantraikan'ny fahatairana izay ilaina amin'ny fametrahana lalàna vaovao raha toa ka miatrika PsyOp manaraka isika. Mazava ho azy izay tsy azo lazaina; tsy afaka mieritreritra izany akory ianao. Mahatsiravina ny manjo azy ireo sy ny tafika troll (manara-maso ny fifanakalozan-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialy) aminao. Na izany aza, amin'izao vanim-potoanan'ny teknolojia lalina izao, tsy maintsy matoky isika fa tsy eken'ny fanjakana sy ny fampahalalam-baovao aminy isika mba hampiditra lalàna izay tsy ekena mihitsy.
Fotoana fohy lasa izay dia nisy ny resaka lalàna izay ahafahan'ny olona hidina tsy misy fidiran'ny mpitsara na mpitsabo. Nisy ny fanangonan-tsonia iray avy amin'ity tranokala ity ary ny fanoherana hafa avy amin'ny fiaraha-monina tamin'izany fotoana izany no nanangana ny fikambanan'ny mpisolo toerana faharoa volavolan-dalàna avy amin'ny Edith Schippers. Tsy mbola masaka ho an'ny fotoana io fotoana io. Ny olona aloha dia tsy maintsy nahita ny filana. Raha ny fianakavian'ny matoatoa Ruinerwold dia nitarika ny fanesorana ny tokonam-baravarana ka afaka nijery teo ambadiky ny varavarana rehetra sy ny mpiara-monina na namana tsy ho ela ny toe-tsaina avela hiantso ary ekena io volavolan-dalàna io, ny tsirairay dia afaka miafara amin'ny andrim-panjakana GGZ ary tsy miverina intsony. Satria any ianao dia afaka atsipy any amin'ny sela mitoka-monina tsy misy marika hitadiavanao azy ary mahazo fanafody ianao tokony hojerena raha lasa adala ianao.
"Eny, fa Vrijland. Tena nitranga ity vono olona ity. Fantatro ireo olona mipetraka eo akaiky eo.","Fantatro manokana ny olona","Manana namana izay nipetraka teo akaikiny aho","Fantatro ny olona mpiara-miasa aminy","Fantatro ilay fianakaviana","maro ny fampiononana","fa raha tsy izany dia tonga amin'ny fandevenana anao ianao, dia ho hitanao izany","Fantatro ny tompon'ny orinasa","manala baraka ny havana!","Fantatro fa misy tokoa Atoa ErgünAry noho izany dia hisy valiny marobe. Mety ho marina avokoa izany, saingy izao no ahafantarantsika ny fisian'ny fahalalinana lalina ary fantatsika fa ny media sosialy dia arahi-maso ihany koa ny fanehoan-kevitra matihanina, tsy fantatsika mazava tsara mihitsy. Ankoatr'izay, ny mpanohitra dia mety natolotra ihany koa harona vola sy manana identité vaovao any Arzantina, fa an'izany. Ny lalotra lalina dia afaka manao toetra, anisan'izany ny tantara iray manontolo, dia hita ho tena misy (vakio eto ny fomba fiasan'izany). Azonao atao koa ny miara-miasa amin'ny mpilalao amin'ny maha mpilalao azy, ka tsy fantatrao. Tsy azonao lazaina izany. Ny zavatra rehetra fantatsika, fantatsika amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao sy ny media sosialy. Amin'ny lafiny ara-teknika, azo atao ny mampifangaro PsyOps ary raha azonao ampiasaina izany hampidirana lalàna izay tsy ekena mihitsy, dia efa tratranao.
Ity raharaha ity dia mety hitarika mora amin'ny fizahana fanekena haka ireo mpikirakira mikorontana na izay tsy miara-miasa amin'ny politikam-panjakana. Avy eo dia nametraka ny fototry ny polisy fasista amin'ny palitao miloko marevaka ianao: amboadia amin'ny fitafian'ny ondry.
Efa zatra amin'ny polisy manontany anay izahay. Nitranga izany teo ambanin'ny fitondrana 40 / '45. Tadidiko fotoana iray izay nahafahanao nandeha teny an-dàlana tsy nanana pasipaoro na ID fotsiny ary tsy nisy olona nanontany momba izany. Sanatria izany! Lohahevitra tsy misy izy io; zavatra matanjaka loatra. Tsy nitondra pasipaoro na ID hiaraka aminao akory ianao. Ny tanora ankehitriny dia mazàna manana ny karapan'izy ireo foana ao am-paosiny, noho ny karazana lalàna rehetra nanatanteraka izany. Fantaro rehefa mivarotra zava-pisotro, rehefa miditra diso sy tranga maro hafa. Ary mieritreritra izahay fa ara-dalàna izany, satria nisy ny olana nilaina tamin'ny fampidirana an'io adidy io. Ary izay indrindra no hitantsika. Amin'ny asa ara-tsaina (PsyOp), olana iray amin'ny fiantraikany ara-tsosialy lehibe dia noforonina foana, avy eo ny valinteny (avy amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra toy ny Pauw sy ny media sosialy dinika) ary avy eo atolotra ny vahaolana. Izany no lalàna vaovao henjana kokoa: fanjakana polisy bebe kokoa.
Amin'ny hoavy tsy ho ela, tsy vitan'ny hoe mampiseho ny karapanondronao, fa afaka alaina ao an-tranonao koa ianao raha tsy misy famelan-keloka ary tsy manome antony. Avy eo dia mety hiafara ao amin'ny efitrano GGZ tsy misy varavarankely ianao ary afaka manome fanafody anao izay mahatonga anao hahatsiaro reraka kely. Raha afaka ora vitsivitsy, dia nipetraka tao amin'io efitrano io tsy nisy varavarankely ianao ary nanomboka naneho fihetsika tsy mahazatra (ohatra, lasa claustrophobic ianao), mety midika izany fa hiditra ao amin'ny milina GGZ mall ianao. Tsy misy akoho maneno eo. Ary norakinao ny lalàna rehetra izay nahafahana nanao izany, satria tena ilaina izany; ho an'ny famonoana an'i Pathé, ho an'i Anne Faber, ho an'i Ruinerwold, ho an'ny, ho. Toa horonantsary mahatsiravina izany toerana hipetrahan'ny tsirairay indraindray hijery sarimihetsika.
Manantena izahay fa ianao koa mieritreritra ao amin'ny horonan-tsary eto ambany hoe: "Tsy maintsy efa nahazo an'io ilay rangahy, tokony naneho fihetsika mampiahiahy izy."
Tags: fiaraha-miory, Featured, horonan-tsary, namaly, tohina, Gina, Groningen, Marinus, haino aman-jery, vonoan-olona, Pathe, psyop, ara-tsosialy
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 11: 50
Eny, efa 33 taona izy ...
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 12: 47
Ny isa 33 dia fanondroana ireo vondrona tsiambaratelo izay anisany avokoa ny mpitarika ao amin'ny politika, ny fahamarinana, ny lalàna ary ny media.
Izy ireo no mitazona ny Trumanshow: Ny zava-misy araka ny hitanao azy.
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 08
Tsarovy ... ianao koa ny sarimihetsika nosamborin'ny polisy tany Michigan rehefa tsy mampiseho ID, mety efa natsangana mba hamela ny mpijery zatra amin'ny fanjakana polisy ary ho raiki-tahotra raha tsy mandray anjara ianao. .
Ohatra tsara amin'ny polisin'ny polisy misimisy kokoa sy ve izy io, satria miha-jerena hatrany any Holandy. Hanaiky ny lalàna rehetra takiana amin'izany ianao, satria am-pitiavana ianao 'ireo olan'ny media lehibe.
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 16
Toa vonona ny olona noho ny famonjana ny gadra "mety hisafotofoto" (izay mety ho marika ho an'ny olona rehetra ... tao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha no nantsoina hoe mpanohitra)
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 23
Heveriko fa ny toetran'i Ergün S dia miorina amin'ny Kramer avy any Seinfeld 😉
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 14: 44
Kramer dia lehilahy very hevitra toy izany koa ..
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 16
“Ilay vehivavy, izay nampidirina tany amin'ny hopitaly, dia namaritra ilay manodidina azy irery. "Ny" miaina sy avelao ho velona indrindra "no tena antony eto. Tsy mifampisisika eo na mifosa resaka momba ny tsirairay. Amin'ny trano tsirairay dia manana taniny izy ireo ary mipetraka ao manokana ianao. Ho an'ny olona novonoina, mitovy amin'ny fampiharana izany. "
Eny tokoa .. ka ny mpiara-monina tsy tena nahalala azy ireo .. na tena tsy ..
Tsy fantatrao ve izany?
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 31
Tena haingana sy mora mahalala izany .. raha te hahita azy! Martin, efa ela no nanarahako anao, hatramin'ny fotoana nanehoanao ahy ny tena toetran'i Micha Kat, tena manaja anao aho ary nahalala zavatra betsaka avy aminao aho! Misaotra
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 24
Akory ny hafatr'i John de Mol raha mamaky an'io? Ankehitriny ny mpiara-monina dia mahalala tsara ireo niharam-boina ?!
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 27
Jereo amin'ny minitra 9: 09…
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 16: 09
Famokarana mivantana toy izany any amin'ny sinema ... tsara
30 Oktobra 2019 ao amin'ny 06: 57
3.33 minitra, tsy nahazo fasika intsony izy io.
27 Oktobra 2019 ao amin'ny 20: 46
De Telegraaf no tontolon'ny fitaratra ary enceclopedia, isan'andro.
Ahoana no mety hitranga?
De Telegraaf mahalala ny FAHOROANA? Foana! mivantana!
Super Columbo's, Sherlock Holmes dia anjarany.
Fantatr'izy ireo fa madio amin'ny sinema izy ireo.
Fantatr'izy ireo avy amin'ny ankizy de Spook (amin'ny Drente) fa olona tena mahay izy ireo ary ny telegraaf irery no mahay mamaky ireo sary facebook misy ny zanatsoratra. (misokatra rohy eto ambany miaraka amin'ny maody incognito)
fa aza hadino ny Amsterdam, Hugo de Groot square.
Johny van de H ary welly sy Schoolenberg dia manana ny diamondra izay tsy misy olon-kafa, izy ireo no hazakazaka Agatha Christie manerantany, tantara rehetra no fantatr'izy ireo avy hatrany. (izany dia mazava ho azy fa kitoatoa)
Te-hihinana ronono iray aho, andefaso Johny van de H hoentina ronono iray, ary niverina niaraka tamin'ny tavoahangy iray vita tamin'ny tavoahangy izy, teo am-biby ihany izy. Angamba i Matthijs N hiverina miaraka amina boaty enina miendrika enina, avy eo izy no nanao ny tsara indrindra ho azy.
De Telegraaf dia mahalala foana ny zava-drehetra ao anatin'ny ora vitsivitsy! tsara hoy
28 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 52
Azonao atao ny manampy amin'ny lisitry ny lisitray: ny zo tsy hanaiky ny fidirana amina andrim-pitsaboana tsy misy baikon'ny fitsarana.
Ny zo mandà ny fanafody dia tsy maintsy manan-kery foana na inona na inona hevitry ny mpitsara.
(fahavonon-tena ara-batana sy ara-tsaina)
Manontany tena aho hoe firy ny lisitr'ity lisitra ity momba ny 10 taona dia mbola manan-kery, tsara ny marika amin'ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny.
28 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 31
Mitatitra ny AD: "GGZ te hanery ny famonoana sinema mba hokarakaraina". Tahaka ny nolazaiko hoe: "Olana, Fitiavana, Vahaolana" amin'ny volavolan-dalàna Edith Schippers avy amin'ny governemanta teo aloha. PSYOP?
N. Leeman nanoratra hoe:
28 Oktobra 2019 ao amin'ny 23: 12
Ny fomba marina no nomena ny lalàna momba ny mpamatsy vola. Ny fanapahana amin'ny vatana dia rava amin'ny fomba ofisialy.
Efa amin'ny herinandro izao ny famerenana ny vaksiny ... ary mbola lavitra ny lisitry ny faniriana.
30 Oktobra 2019 ao amin'ny 07: 01
Mitovitovy ff fikorisana, ary vita ianao.
30 Oktobra 2019 ao amin'ny 07: 06
FIVORIANA NY ZAVATRA TSY MISY AZONAO, Ny Zaza Hatramin'ny Hitanao !,
30 Oktobra 2019 ao amin'ny 21: 07
Vao manomboka izany.
Ny lahatsoratr'ilay mpitoraka blaogy (Martin Vrijland eto) dia efa naneho sahady anay fa ambany ny hetsika
tsy azo itokisana ary voamarina fa ny disinfo mitambatra
esorina ny zava-misy lehibe isan-karazany.
tsy manana surname ve i Marinus?
ary maninona no tsy manana anarana farany i Gina? fa taona
tsy manana internship any Korea ve ny zanany?
ary ny vavy sa?
Maninona no dia toa mampihomehy ilay dia mangina, toa antsika ihany koa fa ilaina amin'ny fanodinana.
Maninona no fantatra ny zava-drehetra momba ilay nahavanon-doza ary saika tsy misy ny momba ireo traboina, tsy azo atao izany
Very hevitra ny olona? araka ny lahatsoratra eto ambany (rohy) hoy ny mpifanolo-bodirindrina, inona no lazainao ny mpifanila trano aminy, goddamn HORRIBLE raha tena marina, inona no atao, inona no ahatafom-bava, raha sendra mihinana ny siropao avy amin'ny pancakeo ianao, nefa gaga ianao amin'izany Tranga mahatsiravina iray.
Manam-peo ny feon'ny Groningers, maimbo izany!
30 Oktobra 2019 ao amin'ny 21: 14
Adinony ny antony, manontany tena ianao fa tsy misy ny mamy
sarin'ireo mpivady manadio Marinus sy Gina ao amin'ny Bios van Pathee ao Groningen….
Marina sy be dia be ny fanontaniana misokatra
adje nanoratra hoe:
30 Oktobra 2019 ao amin'ny 23: 20
Tsara ny mpiray tampo amiko ao amin'ny sinema ary naman'ny mpivady izy ireo.
Hanontany aho raha mieritreritra izy hoe psy-op na tsia.
Tsy mbola nahita fotoana eny amoron-dranomasina akory. Miarahaba!
31 Oktobra 2019 ao amin'ny 10: 17
Iza no anadahin'ny rahalahinao, afaka miantso azy aho? Ary tsy efa nanontany ve ianao fa tamin'ny fotoana nitrangan'ny Adje?
Fantatrao fa naman'ny mpivady izy, nefa mbola tsy niresaka taminy momba izany?
Ahoana no ahafantaranao fa naman'ny mpivady izy?
Ary raha misy izy ireo ary efa naman'ny namany izy (izay, raha ny hevitro dia efa misaraka ihany koa, satria ny mpitantana dia tsy mpinamana mivantana amin'ny mpanadio), dia mbola azo atao tsara fa PsyOp izany.
Mety voalavo ve i Adje?
31 Oktobra 2019 ao amin'ny 17: 32
Vao nivoaka aho ary tsy nahalala an'i 'Adje', tsy mbola hita ny fanehoan-kevitra teo aloha.Tsy azo atao ny iray amin'ireo zazalahy amin'ny script na miasa ho andevon'ireo tovolahy an'ny script, ireo mpisoloky ary mpamitaka. . Tena tsara izy ireo amin'izany satria mitelina ny zavatra rehetra ny mponina.
Wind vaovao nanoratra hoe:
31 Oktobra 2019 ao amin'ny 23: 06
Marina sa diso ... psy-op sa tsia
"Aza avela hanimba ny krizy ratsy fotsiny"
Tsy ny fijeriko ... Fa ny zavatra rehetra efa voalaza miaraka amin'izany.
Tsara marihina; mikasa ny tsy hanakana ary / na fanamorana dia mitovy amin'ny fanaovan-tsoa!
« Ny mpampihorohoro sainam-pirenena diso dia manafika an'i London, Manchester, Paris, Barcelona ary Rotterdam amin'ny 23 sy 24 Oktobra? (VAOVAO))
Ny lavaka mainty nolalaovan'ny NASA dia tena plasmida misy ranona »
Riffian op Ny dingana voalohany dia ny fametrahana marika, ny dingana faharoa dia fivoahana: ny bokotra fanaovana vaksiny